Orientation ho an'ny mpanjifa-News-NingBo COFF Machines Co., ltd
Vanim-potoana fandefasana indray izao
Fifanarahana amin'ny mpanjifa
Ny andraikitra dia mavesatra noho ny Mountain Tai
Fanontaniana momba ny haben'ny fitaovana takian'ny vahiny
Fotoana: 2021-04-22 Comment: 21
Ny orientation-ny mpanjifa dia ny COFF peple's concept, izay manampy ny COFF hahazo mpanjifa tsy mivadika bebe kokoa. Amin'ny faran'ny taona 2020, ny iray amin'ireo mpanjifa eropeana an'ny COFF dia nangataka andian-milina Canning & Filling. Nahazo teny notsongaina vitsivitsy avy amin'ny manufacurer China ny mpanjifa.
Saingy, farany nanapa-kevitra ny mpanjifa ny hametraka ny baiko miaraka amin'ny COFF na dia fantany aza fa tsy ny COFF no mpanamboatra mivantana. Nandritra ny fanatanterahana ny fifanarahana, ny COFF dia nanilika ny injenierany imbetsaka tamin'ilay manufacurer mba hifampiresaka tamim-pitandremana amin'ilay mpamatsy amin'ny antsipiriany ara-barotra sy ara-teknika, ao anatin'izany ny marika sy ny fepetra takiana amin'ireo singa lehibe sy singa elektrika rehetra.
Ho fanampin'izay, amin'ny olana lehibe amin'ny atin'ny ôksizena mandritra ny famenoana izay ahin'ny mpanjifa indrindra, ny COFF dia manampy fitaovana iray hafa amin'ny vidiny manokana mba hahatonga ny mpanjifa hanana vokatra tsara kokoa miaraka amin'ny vidiny ambany. Inona koa mandritra ny fanatanterahana ny baiko, ny COFF dia handefa ny injeniera farafahakeliny indray mandeha isan-kerinandro hanaraha-maso sy hijerena ny fandaharam-pamokarana sy ny kalitaony.
Ny fahatokisan'ny mpanjifa dia tena nankamamin'ny olona COFF!
Raha mila fanazavana fanampiny, mifandraisa pls Jessie@nbcoff.com
Previous: Vanim-potoana fandefasana indray izao
Next: Ny andraikitra dia mavesatra noho ny Mountain Tai
Ny Seaso fandefasana ...
Mavesatra ny andraikitra ...